AnyDVD & AnyDVD HD 6.5 Final ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​တစ်​ချို့ DVD ​တွေ​က ​ဖွင့်​ကြည့်​လို့​မ​ရ​ပါ​ဘူး ​ဆို​တဲ့​သူ​ငယ်​ချင်း​များ​အ​တွက်​ပါ . ​ဘယ်​ဖွင့်​လို့​ရ​မ​လဲ format ​ချင်း​မှ​မ​တူ​တာ . ​တစ်​ချို့ DVD player ​တွေ​က format ​အ​စုံ​မ​ပါ​ဘူး . ​အ​ခု​ဟာ​က ​အ​ကုန်​လုံး​အ​တွက်​အ​ဆင်​ပြေ​တယ် . format ​အ​ကုန်​ပါ​တယ် ..
Download Rapidshare ၊ Download Megaupload
rapidshare ​ဖြင့် download ​လုပ်​နည်း
​ဖိုင်​ဆိုက် 100 ​အ​ထက်​ရှိ​တဲ့​ဖိုင်​တွေ​ကို ​ဘယ်...
Megaupload ​မှ download ​လုပ်​နည်း
zshare ​ဖြင့် download ​လုပ်​နည်း
4shared download ​လုပ်​နည်း